Gresy : Fahadisoam-panantenan’Ireo Tsy Misy Taratasy Ara-Dalàna Migadra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2013 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Español, Italiano, русский, English
Isan'ny fanadihadiana ataonay momba ny Krizy any Eoropa ity lahatsoratra ity.
Naparitaka tao amin'ny Twitter ny tantaran'ny hadisoam-panantenana, rehefa avy nitsidika ny tobin'ny mpitandro filaminana any Drapetsona any Piraeus , toerana misy ireo mpifindra monina tsy nahazo alàlana maherin'ny 100 miaina amin'ny toerana tsy mendrika sy haizina ireo mpanao politika, mpanao gazety ary ireo mpikatroka mafàna fo mpanohitra ny fanavakavahana.
Misy olona iray voatàna niteny fa efa am-bolana maro izy no tsy nahita masoandro. Iray hafa nanandrana namono tena.
Isan'ireo vondrona nitsidika ilay toby any ivelan'i Atena renivohitra aho ny 6 Aprily 2013. Ary amin'ny alàlan'ny bitsiko ahitàna ny fijoroana vavolombelon'ireo mpitsidika hafa no hamaritako ny fepetra iainan'ireo mpifindra monina ao #GreekGuantanamo, anarana iantsoana azy ao amin'ny Twitter.
Hetsika manohitra ny fitazonana tsy araka ny maha-olona atao amin'ny mpifindra monina any Drapetsona. Sary avy amin'ny mpanoratra
Maherin'ny 60.000 ny mpifindra monina voatàna ao amin'ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny fiandohan'ny fisamborana atao hoe : “Xenios Zeus” (anarana fanesoana satria anaran'ny andriamanitry ny fiantràna Grika) izay nanomboka ny volana Aogositra 2012. 4.000 ihany no voasambotra ara-dalàna.
Hatramin'ny taona 1990, nanjary toerana fidirana sy fandalovan'ny olona ho any amin'ny Firaisambe Eoropeana i Gresy, ho an'ireo mpifindra monina tsy nahazo alàlana, an'hetsiny avy any Afrika, Azia ary Afovoany Atsinanana.
Ny mpanohitra ny fifindrà-monina, ny vondrona fasista izay misy ny antoko Nazi amin'ny endriny vaovao “Golden Dawn”, dia nampiaka-peo ao amin'ny firenena izay marefo ara-toekarena sy vitsy asa. Ny 10%-n'ny vahoaka Grika dia mpifindra monina tsy ara-dalàna avokoa, araka ny antontan'isa.
Fanindroany izao tao anatin'ny roa volana, no nisy iraka nitsidika io tobin'ny mpitandro filaminana manokana io mba hitantara ny fepetra tsy maintsy iaretan'ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna izay tsy mahafeno ny fepetra ahafahana miaina ara-dalàna any Gresy.
Ny maro tamin'ireo mpitsidika dia natosiky ny taratasy iray mitantara amin'ny antsipirihany nosoratan'i George Karystinos, mpikambana ao amin'ny Vondron'ny Mpanohitra ny fasista avy any Pirée izay isan'ireo iraka voalohany nitsidika io tobin'ny mpitandro filaminana io ary vavolombelona nahita maso ny fepetra niainan'ireo voatàna tao. Tena nahatezitra izay voasoratra tao. Eo ho eo amin'ny olona 100 no tànana ao anaty trano mirefy 70 metatra tora-droa, ny sasany aza efa 9 volana no tao.
Mitokona tsy mihinan-kanina ny sasany amin'ireo gadra ireo taorian'ny nanandraman'ilay tovolahy Palestiniana 28 taona namono tena, noho ny zava-mitranga manjaka ao, ary voalaza fa darohan'ny mpitandro filaminana izy ireo mba hampitsaharan'izy ireo ny fitokonanay.
Nandritra ny fitsidihana voalohany dia nanomboka nandratra tena teo anoloan”ilay komity ny iray tamin'ireo gadra mba hanehoany ny fahadisoam-panantenany. Izao no voasoratr'i George Karystinos [el]:
Hahazo fahafahana ilay gadra izay nandratra tena, tahaka izany ihany koa ilay Palestiniana nanandrana namono tena hoy ny fanambaràn'ny lehiben'ny sampan-draharahan'ny mpitandro filaminana. Inona no hafany ? Mila manandrana namono tena ianao mba hohafahana, ary raha manam-bintana ianao, dia ho velona any amin'ny toeram-pitsaboana.
Sary vao haingana avy ao amin'ny toeram-pihazonana vonjimaika ao Drapetsona. Tsy misy varavarankely, tsy misy varavarana mivoaka. Sary nalefan'i @eleniamorgos oo amin'ny Twitter
Nifanojo tamin'ny fitokonana teo ivelan'ilay toeram-pihazonana ny fitsidihanay. Ireo mpampiasa Twitter nanatrika teo dia nitatitra ny hamaroan'ny mpitandro ny filaminana teo ivelan'ny toby [el]:
@Cyberela: Mihidy ny varavaran'ny mpitandro ny filaminana. Laharana mpitandro filaminana 3. #greekGuantanamo
Teo ivelan'ny toby ihany koa aho, efa eo am-pidirana amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny komity ahy, ary nanandrana nitatitra izay zava-mitranga tao amin'ny kaonty Twitter-ko @WonderMaS :
@WonderMaS: Aty ivelan'ny tobin'i Drapetsona miaraka amin'ny Front Antifasciste, ny Amnisty iraisam-pirenena, ary solombavam-bahoaka roa, Dritsas sy Lafazanis izay vao nivoaka ny tobin'ny mpitandro ny filaminana.
Rehefa avy nifampidinika tamin'ny lehiben'ny toby ny amin'ny isan'ny olona afaka miditra ny Solombavam-bahoaka Dritsas avy amin'ny antoko Syriza dia niditra izahay ary nibitsika aho :
@WonderMaS: Tafavoaka ny tobin'ny mpitandro filaminana ao Drapetsona, Pireaus. Miaina tahaka ny biby ireo mpifindra monina ao, misakafo in-droa isan'andro, amin'ny 16.00 ny voalohany #rbnews
@WonderMaS: Mpifindra monina iray no niteny tamiko fa tsy nahita masoandro efa am-bolana maro #rbnews
Nisy mpikambana ao amin'ny Vondron'ny Mpanohitra ny fasista any Pireaus nibitsika [el] hoe:
@eleniamorgos: Tsy mifarana foana ny fihazonana azy ireo na dia efa tapitra aza ny fetra farany, noho ny resa-pitantanan’ (ny ministeran’) ny fifindrà-monina .
@eleniamorgos: Tsy omena fikarakaràna ara-pahasalamana izy ireo rehefa marary na mitokona tsy misakafo.
Nazavain'ilay lehiben'ny toby fitànana vonjimaika fa manao izay azony atao izy ireo mba hanatsaràna ny fomba fihazonana, miaraka amin'ny kely anànany na ny fanampiana kely avy any amin'ny Ministera. Lazain'i Teseris fa mitondra fanafody avy any an-tranony izy hamenoana ny tsy fanànan'ny Ministera.
@WonderMaS: Ambaran'i Teseris, lehiben'ny departemantan'ny polisy fa tsy natao hihazonana olona am-bolana itony toerana itony fa 2 na 3 andro ihany #rbnews
Ny sasany tamin'ireo gadra niteny tamiko fa tsy misy trano fidiovana, ary matetika no tsy misy savony. Ny sasany kosa milaza fa tsy dia mahalala fomba loatra ireo mpitandro filaminana sasany na dia tsy midaroka azy ireo aza. Maro amin'izy ireo no tsy manana mpisolo vava na fifandraisana amin'ny ivelany, ary ireo mba manana mpanampy eo amin'ny lafiny lalàna dia niteny tamiko fa tsy misy fandrosoana ny fikarakaràna ny momba azy ireo.
Ohatra ny hoe diso fanantenana ny ankamaroany, ary mijery ahy ho toy ny hany fanantenan'izy ireo.
Rehefa nanopy maso tao anatin'ilay toby aho dia nahita lamba mihahy. Na dia eo aza ny tsy fahatomombanan'ny fepetra iainan-dry zareo dia miezaka mandamina ny toeram-pigadrany izy ireo, Tranga izay hahatsapako fa avy aminà fianakaviana mivoatra sy mandala ny fahamendrehana ireto olona ireto. Ho an'ny sasany dia ny fitadiavana izany fahamendrehana izany angamba no mitarika azy ireo ho amin'izao toerana izao.
Manizingizina ny fahadisoam-panantenana iainan'ireto gadra ireto ilay psikôlôgy manara-maso azy ireo :
Nolazain'i Abatzidi Dionusia, psikôlôgy ao amin'ilay tobim-pitandro filaminana any Drapetsona fa diso fanantenana ireo olona ireo
Misy gadra sasany niteny tamin'ireo iraka fa tsy misy ny herisetra aara-batana ; tamin'ity indray mandeha ity, fara-faharatsiny, tsy araka ny nolazain'ny mpanao fihetsehana iray :
@Cyberela: Ny fahitana fa tsy nisy diam-bono nahazo ireo gadra talohan'ny fitsidihana androany dia tsy midika fa adinonay ireo tany aloha #greekGuantanamo
Iray amin'ireo gadra no nitantara taminay fa hatramin'ny fitsidihana voalohany sy ny fitsidihin'ny olona avy any ivelany, dia nisy fiovan-javatra,” namboarin'izy ireo ny jironay, maty nandritra ny andro maro ny jiro”. Ary nohamafisin'ny mpitsidika sasany izany :
@Cyberela: [Solombavambahoakan'i Syriza ] Dritsas: nanampy azy ireo tamin'ny zava-miseho ilay hetsika. Natao hihazonana olona mandritra ny 48 ora ny toby fara-faha-elany #greekGuantanamo
Andro vitsy taorian'ny fitsidihana, nanambara ny fisian'ny fanadihadian'ny solombavam-bahoaka Atoa Dritsas, izay manery ny Minisitry ny fiarovana ny mponina hanafoana ny “Xenios Zeus” fandaharan'asa fisamborana ireo mpifindra monina, izay midika ho fanosihosena manao tohivakana ny zon'olombelona.
Nampiseho karazan-tsary momba ilay fihetsiketsehana tao Drapetsona ao amin'ny bilaogy Dromografos i Stefanos Koufopoulos, mpaka sary. Niara-niasa tamin'ny fanaparitahana ity lahatsoratra ity sady nanangona ireo loharanom-baovao tao amin'ny Storify i Asteris Masouras, mpanoratra ao amin'ny Global Voices.